တရုတ်နိုင်ငံ၌ အအေးလှိုင်းအတွက် အပြာရောင် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အအေးလှိုင်းအတွက် အပြာရောင်သတိပေးချက်ကို သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီး နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အပူချိန်ကျဆင်းကာ အအေးလှိုင်းဖြတ်နိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသဌာနက ဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ခန့်မှန်းထားသည်။ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်အထိ တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတို့တွင် အပူချိန် ၆ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယက်စ် မှ ၁၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယက်စ် အထိ ကျဆင်းနိုင်သည်ဟု အမျိုးသားမိုးလေဝသစင်တာ မှ သိရသည်။
အချို့နေရာများတွင် အပူချိန် ၁၄ ဒီဂရီ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယက်စ်အောက်ထိ ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသစင်တာ မှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အရောင်လေးဆင့် မိုးလေဝသ သတိပေးစနစ်ရှိပြီး အပြင်းထန်ဆုံး ရာသီဥတုကို ကိုယ်စားပြုသည့် အနီရောင်၏ နောက်တွင်လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်နှင့် အပြာရောင်တို့ အသီးသီး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Dec. 23 (Xinhua) — China’s meteorological authority on Thursday renewedablue alert foracold wave, forecasting low temperatures and gales in vast regions of the country.
From Thursday to Sunday, temperatures are expected to drop by6to 10 degrees Celsius in central and east China, according to the National Meteorological Center.
Some areas could seeatemperature drop of more than 14 degrees Celsius, according to the center.
The center advised the public to take necessary precautions against the cold weather and strong winds and suggested traffic and police authorities prepare for icy road conditions.